Sanbaloolshe oo shaaciyey qaabka looga adkaan karo Al-Shabaab. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sanbaloolshe oo shaaciyey qaabka looga adkaan karo Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay Taliye Sanbaloolshe in Shabaab ay mar walba beegsadaan cidd kasta oo ay u arkaan inay horumar ka wado dalkan, si ay caalamka uga niyad jebiyaan ka qeyb qaadashada dib u dhiska dalkan burburay.
Taliyihii hore ee NISA ayaa dowladda ugu baaqay inay wax ka bedesho nidaamka sugidda amaanka dalka, isagoo kula taliyey inay sameyso seddax qodob oo kala ah, kow in Al-Shabaab caqiido lagula diriro, labo in dagaalkan lagu wajaho kacdoon shacab, iyo qodobka sedaxaad oo ah in hey’adaha ammaanka loo dhiibo dad aqoon u leh, ciidamada dalka u dhimanayana xuquuq fiican meel loo saaro.
Ugu dambeyntii Talihii hore ee Nabad sugidda ayaa sheegay in amaanka dalka aan la sugi karin inta siyaasadu sidan u cakirantahay. “Waxaan qabaa in Soomaalidu kulligeed Shabaab meel uga soo wada jeesato, mana qabo in dowladda hada jirta ay Shabaab ka guuleysa karto” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyey Taliye Sanbaloolshe.
Ciidanka Dowladda oo dagaal kula wareegay deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab
Cabsi dagaal oo ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan